All Articles - Page4of 37 - Shop
Let’s Explore Mega Campaigns’ 10 Popular Features of Shop MM084
The KaungHtet January 27, 2022 11:36 am January 27, 2022
Shop MM (Daraz Myanmar), the biggest online shopping platform in Myanmar, offering over millions of products and attractive discounts from …
New Year, New Fashion Resolution 20220327
စျေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော Skincare များဖြင့် အခြေခံကျကျ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းများ0319
The KaungHtet January 18, 2022 10:58 am February 22, 2022
စျေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော Skincare များဖြင့် အခြေခံကျကျ နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းများ လူတိုင်းရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ (Personal Image) ကို A,B,C ဆိုပြီး ၃ ပိုင်း ခွဲခြားထားပါတယ်။ A – Appearance …
Community, Lifestyle, Others, Social Causes
Sustainability & Climate Change – ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်း0373
The KaungHtet January 13, 2022 8:50 am February 26, 2022
[ENG Below]ခုနှစ် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကမ္ဘာအနှံ့လှုပ်ရှားမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာပြီး ၄င်းထို့ထဲ ထင်ရှားသောလှုပ်ရှားမှုများမှာ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၊ “Me Too” လှုပ်ရှားမှု ၊ “Stop Asian Hate” လှုပ်ရှားမှု၊ လိင်တူထောက်ခံလှုပ်ရှားမှု၊ “Black Lives Matter” …
101 Dog Care Tips: For Beginners0265
ယခုလိုခက်ခဲပြီး အိမ်မှာအများဆုံးနေရတဲ့ Stay-Home ကာလမျိုးမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစု နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ချိန်ပြီးရင် အိမ်မွးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူထားတဲ့ သူများအတွက်ဆိုရင် သူတို့လေး‌တွေနဲ့ အကုန်ဆုံးရတဲ့အချိန်တွေကပိုများကြတယ်မဟုတ်လား? ဒါ‌ကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများထဲမှ ဝုဝုလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ခွေးလေးတွေကိုမွေးမြူကြတော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်မယ့်အခြေခံအချက်လေးတစ်ချို့ကို အားလုံးနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ …
Self-Esteem နဲ့ Self-Confidence ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ?0484
• မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု – Self-Esteem • မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု – Self-Confidence ခုနှစ် “၂၀၂၁” ကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ကျရှုံးမှုတွေ၊ ပြန်လည်အားတင်းထားမှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊‌ အောင်မြင်မှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူ အနိမ့်အမြင့် …
Valentine’s Day: Love Is In The Air0352
The KaungHtet January 22, 2021 2:41 pm January 22, 2021
On Valentine’s Day, most of the couples give their loved ones bouquets, dolls, and chocolates as Valentine’s gifts mutually. Every …
၂၀၂၀ 12.12 နှစ်ကုန်အထူးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး Shop မှ ယူဆောင်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။0367
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့ Shop.com.mm ဟာ မယုံနိုင်လောက်တဲ့လျှော့စျေးတွေသီးသန့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ 11.11 ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Shop Anniversary 2020 ပွဲတော်ကြီးနဲ့ 11.11 the world biggest sale 2020 ပွဲတော်ကြီး ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ …